अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, मंसिर २१, २०७३
विरलै अन्तर्वार्ता दिने र राजनीतिक टीकाटिप्पणी नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बीबीसी नेपाली सेवाकी रमा पराजुलीलाई राजनीतिमा केन्द्रित भएर दिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश।
हामीले सय महिला अथवा हण्ड्रेड वुमनका लागि सभामुख र प्रधानन्यायाधीशसँग अन्तर्वार्ता गर्दा प्रधानन्यायाधीशले भनेकी थिइन्: महिला भएकै कारणले उनलाई काम गर्न असजिलो भएको थियो। सभामुखले पनि उनले गरेका काममा मानिसहरुले विश्वास नगर्ने गरेको र ती काम श्रीमानले गरिदिएको भन्ने गरेको बताएकी थिइन्। यहाँको अनुभवमा कस्तो छ ?
तपाईं पार्टीमा पनि उपाध्यक्षसम्म हुनुभयो। अखिल नेपाल महिला संघको नेतृत्व पनि लामो समय गर्नुभयो। रक्षामन्त्री र त्यसपछि राष्ट्रपति बन्नुभयो। तपाईंले त्यस्तो विभेद भोगेको छैन भन्नुभयो तर धेरैजसो महिलाहरु महिला भएकै कारण हेपिएको बताउँछन्। तपाईंले त्यो किन भोग्नुपरेन र अरुले किन भोगेका होलान् ?
उच्च पदमा पुग्नु नै एउटा राम्रो कुराको शुरुवात भयो तर एकैचोटि सबै ठाउँमा भने जस्तो नतिजा नआउन सक्छ र हाम्रो समाज धेरै पछाडि मात्रै खुला समाजमा आएको हो। २०४६ पछि मात्रै मान्छेहरु संसद्मा आएका हुन्, मन्त्री भएका हुन्। अझ हाम्रो देशको अवस्था भन्ने हो भने त राजनीतिक अस्थिरता पनि छ। परिवर्तन भएका संवैधानिक अधिकारहरु समानताका आधारमा व्यवस्था गरिएपनि त्यो लागू हुन पाउने स्थिति छैन। जस्तो लामो समयदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन पाएको छैन। त्यो स्थानीय निकाय गर्ने कि तह गर्ने, नयाँ संविधान अनुसार गर्ने कि हाललाई पुरानै अनुसार गर्ने भन्ने कुरामा विवाद छ। म तपाईंलाई बताउँछु २०४९ सालको स्थानीय चुनाव हुँदा महिला उठ्न पाउने भन्ने त थिएन नि। बराबर हक थियो तर महिलाहरुले १ लाखभन्दा बढीको संख्यामा ३६ जनामात्रै जिते। करिब ४ हजार गाविसका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, ७५ जिल्लाका सभापति-उपसभापति र करिब ५८ नगरपालिका थिए। मेरो सम्झनामा भएसम्म ७५ जिल्लामा एकजना महिलामात्रै उपसभापतिमा जितिन्।
त्यो देखेपछि म चाहिँ एकदमै तर्सिएँ, यस्तो कछुवा गतिमा कहिलेसम्म समाज परिवर्तन हुन्छ र? त्यसपछि महिलाहरुका लागि आरक्षण हुनुपर्यो भन्यौँ। आरक्षण हामीले धेरै नै मागेका थियौँ तर तत्कालीन नेतृत्व तयार भएन। र, २०५४ सालको निर्वाचनमा महिलालाई २० प्रतिशत आरक्षण दिनेमा सहमति भयो। स्थानीय निकायमा करिब पाँच वर्षको अवधिमा कति महिला आए भन्नुहुन्छ भने निर्वाचित भएर ३६ हजार आए। तपाईं हिसाब गर्नुस् पाँच वर्षमा १३६ र ३६ हजारमा कति गुणाले फरक देखियो? त्यहीँ कछुवा गतिले २०४९ सालकै चुनावमा सबै बराबर, सबैले पाउँछन् भनेको भए यो समाज जुन जकडिएको छ नि, पुरानो सामन्ती पितृसत्तात्मक सोच र संरचनामा कति वर्ष लाग्थ्यो होला? ४ हजार करिब सबैतिरबाट मनोनित भएर ४० हजार महिलाहरुले स्थानीय निकायमा काम गर्न पाए, यो २०५४ सालको कुरा हो।
त्यसपछि चुनाव भएको छैन र पछि हामीले पहिलाको १३६ र ४० हजारमा कति फरक भयो भनेर भन्यौँ। महिलाहरुलाई स्थान दिइयो भने त महिलाहरु पनि प्रतिस्पर्धा गरेर आउन सक्नेरहेछन्। हामीले त्यहीँ कुरालाई टेकेर अब स्थानीय तहमा महिलाहरुलाई ५० प्रतिशत दिनुपर्छ भन्यौँ। त्यो कुरा पछिल्लो संविधानमा राख्न त सकिएन तर पनि संसद्को समेत ३३ प्रतिशतलाई गर्दा झण्डै ४० प्रतिशत स्थानीय तहमा हुन्छ। अहिले चुनाव भएको भए ४० प्रतिशत महिलाहरु स्थानीय तहमा हुने थिए। त्यसैले संविधानमा अधिकार लेखिएको छ तर व्यवहारमा चाहिँ चुनाव नभई हुँदैन।
पार्टीहरु तयार भएनन् जबकि लोकतन्त्रका मसिहा सरोकारवाला पार्टीहरु हुन्। उनीहरु चुनावमा गइरहेका छैनन्। आमचुनाव त भयो। पार्टीहरुको दलीय स्वार्थका कारणले चुनाव हुन नसकेको हो। पार्टीहरुको दलीय स्वार्थका कारणले महिलाहरु र पिछडिएका जनसमुदायहरु नेतृत्वमा आउँथे नि त्यो अवसरलाई प्रयोग गरेर तर त्यो हुन पाएन। एकपछि अर्को अभ्यासमा गएर जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो अहिलेसम्म त तीनपटक चुनाव गर्ने बेला भइसकेको हुन्थ्यो ।
चुरे संरक्षणको नेपालको हितको विषय हो। हाम्रो देशको एकएक चिम्टी माटोको हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। जलवायु अनुकूल बनाउनका लागि हामीले हरियालीलाई पनि कायम राख्नुपर्छ। त्यतिबेलाको सरकारले पनि त्यसलाई महत्व दिएको थियो। राष्ट्रपतिको नाममा कार्यक्रम ल्याउने पुरानै चलन हो। अहिले पनि सरकारले 'राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम' ल्याएको छ। खासगरी मैले यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने नै दृढ अठोट गरेकी छु। मेरो कार्यकालमा संविधानमा धेरै अधिकारहरु लेखिएका छन्। ती अधिकारहरुलाई स्थापित गराउनका निम्ति चुनाव गराउनुपर्छ, संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनाव गराउनुपर्छ।
समाजले पनि मान्छेहरुलाई कमजोर बनाउन सक्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर हुन सक्छ। परिवारबाट सहयोग नपाउन सक्छ। आर्थिक भनेको दोश्रो तेश्रो पाटोको कुरा हो। जुन यो समाजलाई न्यायपूर्ण परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोच राखेँ मलाई आफ्नो काम अधुरै रहने हो कि भन्ने एकदमै पीर भइरह्यो के। म मर्छु भन्ने मलाई पीर भएन के अब मैले थालेको काम कसले गरिदेला? मलाई त्यहीँ नै ओखती भयो कि? हुन त विज्ञान प्रविधिले धेरै विकास गरेको छ। मलाई राम्रोसँग डाक्टरहरुले उपचार गरे। त्यो पनि एउटा पक्ष भयो। तर मनोबलको कुरा गर्ने हो भने सदैव सोच्थेँ मेरो श्रीमान् हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि जानुभो।
अनि मैले गर्न शुरु गरेकी थिएँ अब म पनि नभएपछि यो मैले सोचेको कुरा कसले गरिदेला भनेर म बिरामी भएपछि बाटो हिँड्नेदेखि लिएर साथीभाइका हरेकका अनुहारमा मैले हेर्थेँ, मेरो प्रतिविम्ब कसैमा पाउँछु कि भनेर। यो कुरा मैले निकै कम मान्छेलाई भनेकी छु। बाटो हिँड्दा अनुहार राम्रो नराम्रोको कुरा होइन तर न्यायपूर्ण विचार बोकेर हिँडेको छ भने त्यसको अनुहारमा तेज आउँछ नि, त्यस्तो खोज्थेँ। सबैको मायाले सबैको शुभकामनाले ठीक भएँ। हुन त अहिलेसम्मको काम अधुरै छ। तर जे होस् आफ्नो बाटो कोरिँदैछ। (साभारः बीबीसी नेपाली सेवा)